DOWNLOAD NHAZI SCSI SITE NA ONYE ỌKWỌ ỤGBỌ ALA - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Nbudata SCSI Pass site na ndị ọkwọ ụgbọ ala
Ndị ọrụ nke emulator software optical (Daemon Tools, Alcohol 120%) nwere ike izute ozi banyere enweghị SCSI Pass Site Direct ọkwọ ụgbọala mgbe ị na-agba ọsọ software. N'okpuru ebe a, anyị na-akọwa ebe na otu ị nwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka akụrụngwa a.
Hụkwa: Ọkwọ ụgbọala SPTD arụrụ na Daemon Ngwa
Nhazi SCSI Site na onye ọkwọ ụgbọ ala
Mbụ, okwu ole na ole banyere mpaghara a na ihe kpatara eji mee ya. Mmetụta zuru oke nke ngwa ikuku na-adabere na mmekọrịta dị ala na usoro ahụ: maka Windows, windo a kwadoro ga-adị ka ezigbo, nke ndị ọkwọ ụgbọala ahụ kwekọrọ na-enweta. Ndị okike nke ihe ndị a dị n'elu họọrọ SCSI Pass Through Direct, nke Duplex Secure mepụtara. Ejikọtara akụkụ a n'ime nchịkọta nke Mkpụrụ Na-egbu Mmanya na Mmanya 120%, n'ihi na n'ọtụtụ okwu, a na-arụkọ ya na mmemme a kapịrị ọnụ. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọdịda anaghị adị, nke a na-esiteghị na nke a ka ọkwọ ụgbọala a. Enwere ụzọ abụọ ị ga - esi dozie nsogbu ahụ: wụnye software nke a chọrọ ma ọ bụ gbalịa ịtinye usoro emulator.
Usoro 1: Wụnye ụdị ọkwọ ụgbọala dị iche
Ụzọ kachasị mfe iji dozie nsogbu ahụ bụ ibudata SCSI Pass Site na ndị ọkwọ ụgbọala na-esite na saịtị ndị ọrụ.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Duplex Secure
Jiri njikọ n'elu wee gaa ebe ndị mmepe. Mgbe ịchisịrị ibe ahụ, chọta menu dị na nkụnye eji isi mee nke pịa ihe ahụ "Downloads".
Na mpaghara ntanetị, enwere mpempe akwụkwọ anọ - x86 na x64 maka Windows 8.1 na nke mbụ, na nchịkọta yiri maka Windows 10. Họrọ ngwugwu nke dabara osịpụ OS gị, wee pịa njikọ Download na ngọngọ nke nhọrọ kwekọrọ.
Download onye na-enyocha ihe ọ bụla dị na draịvụ ike. Na njedebe, gaa na ndekọ ebe ị ibudatara faịlụ nwụnye ọkwọ ụgbọala, ma gbanye ya.
Na mpio mbụ, pịa "Wụnye".
Usoro nhazi ịkwọ ụgbọala amalite. Achọghị njikọ onye ọrụ - usoro ahụ bụ kpam kpam akpaka.
Na njedebe nke usoro ahụ, usoro ahụ ga-agwa gị banyere mkpa ịmalitegharịa - pịa "OK" iji mechie window, wee malitegharịa PC ma ọ bụ laptọọpụ.
Usoro a egosila na ọ dị irè, ma na ụfọdụ, njehie banyere enweghị ndị ọkwọ ụgbọala ka dị. Na ọnọdụ a, ụzọ nke abụọ ga-enyere aka.
Nzọụkwụ 2: Tinyegharịa emulator drive emulator na ihichapụ ndekọ ahụ
Usoro oge, ma usoro kachasị adabere na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka SCSI Pass Through Direct bụ iji weghachite ihe omume ahụ chọrọ ya. N'oge usoro, ị ga-ehichapụkwa ndekọ ahụ.
Meghee "Malite" ma gaa "Ogwe njikwa". Maka Windows 7 na n'okpuru, họrọ ihe kwesịrị ekwesị na menu. "Malite", na Windows 8 na nke ọhụrụ, jiri "Chọọ".
Na "Ogwe njikwa" chọta ihe "Mmemme na Ngwa" ma gaa ya.
Chọta otu n'ime mmemme emulator emetụtara na ndepụta nke ngwanrọ arụnyere (cheta - Daemon Ngwaọrụ ma ọ bụ Alcohol 120%), họrọ ya na otu pịa na ngwa ngwa, wee pịa bọtịnụ "Hichapụ" na toolbar.
Wepu usoro ihe omume site na isoro ntuziaka ntinye. Ị nwere ike ịmalitegharịa kọmputa - mee ya. Ọzọ ị ga-ehichapụ ndekọ ahụ. Enwere ọtụtụ ụzọ maka ịme usoro ahụ, mana ihe kachasị mfe na nke kachasị mfe bụ iji usoro mmemme nke ndị ọzọ.
Gụkwuo: Idocha ndekọ ahụ na CCleaner
Na-esote, budata nsụgharị kachasị ọhụrụ nke emulator drive drive na wụnye ya. Na usoro ahụ, usoro ihe a ga-enye iji wụnye ọkwọ ụgbọala STPD.
Download Daemon Tools or Download Alcohol 120%
Chere ruo mgbe ngwụsị nke usoro mmemme. Ebe ọ bụ na a na-arụ ọrụ ọkwọ ụgbọala na usoro ahụ, a chọrọ iji reboot iji ya.
Dị ka a na-achị, nhazi a na-enye gị ohere ịnagide nsogbu ahụ: a na-arụ ọrụ ọkwọ ụgbọala, nke usoro ahụ ga-arụ ọrụ.
Ezie, ụzọ ndị a tụlere adịghị akwado mgbe niile ihe dị mma - na ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala maka SCSI Pass Through Direct na-ekweghị ka arụ ọrụ. Nyocha zuru oke nke ihe kpatara nke a bụ ihe karịrị isiokwu a, ma ọ bụrụ na nkenke - nsogbu ahụ na-abụkarị ngwaike ma dị na ntụpọ nneboard, nke dị mfe ịchọpụta site na isoro mgbaàmà.